Job vacancies | Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co.,Ltd ﻿
Room (1110), 11th floor, Yuzaba Tower, Shwegonedine Road, Bahan Township,, Yangon, Myanmar.
Rohto-Mentholatum Co., Ltd. ကို Japan နိုင်ငံ Osaka မြို့တွင် ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၌ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နံပါတ်(၂)ဆေးနှင့်အလှကုန် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်နံပါတ်(၁) OTC မျက်စဉ်းဆေးနှင့် အခြားသောဆေးနှင့် ဆေးအလှကုန် ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ လျှက်ရှိပါသည်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၁၅၀)ကျော်တွင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ "V-Rohto" မျက်စဉ်းဆေးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ မှ စတင်ပြီး “ACNES” ၊ “OXY” ၊ “Sunplay” ၊ “LipIce” ၊ “Happy Event” ၊ “Lip On Lip” ၊ “Selsun” ၊ “Remos IB & IR” ၊ “Scar-Z” စသည့် Products များကို ယနေ့ထိတိုင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
Rohto-Mentholatum(Myanmar) Co.,Ltd Head Officeကို ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ယုဇနတာဝါ၊ အခန်းအမှတ် (၅၀၅) ၅လွှာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး မန္တလေးတိုင်း၊ ၃၂-၃၃ လမ်း ၇၇-၇၈ လမ်းကြား၊ Great Wall Shopping Center ၊ ပထမထပ်၊ အမှတ် 16 fc တွင် ရုံးခွဲအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ Rohto Beauty and Spa ကိုလည်း အမှတ် ၁၇၃၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ အောက်ပါ ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် အမျိုးသမီး(သီးသန့်) ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု့များမှာ - Massage, Skin Care, Hair Treatment, Body Treatment, Waxing, Nail Art and Manicure or Pedicure များကို ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာဖြင့် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသားအရေ တင်းရင်း နုပျိုစေရန် အာမခံဖြင့် ရေခဲပေါင်းတင် သန့်စင်ပေးနေပါသည်။
ယခုအခါ မြန်မာပြည်တွင်လည်း Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co., Ltd. အမည်ဖြင်မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုန်တွင် စက်ရုံကို စတင် လည်ပတ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့စက်ရုံဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်းဖြင့် နောင်အနာဂတ်တွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် မိဘပြည်သူများထံသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
753 Days, Full time , Manufacturing
754 Days, Full time , Manufacturing
•	Ensure the data entry in Bin Card, Ledger and Computer System. •	Prepare issue products and complete order for Production and Distributors. •	Must need to Communicate quality related information to relevant organization. •	Have to report to Head of Department. •	Participate in development of product specification.